TTSweet: သူ့အဖေရယ် ပြောမှ ပြောတတ်ပလေတယ် ....
TTSweet post တွေအားလုံးဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။တချိန်လုံး TTSweet blog ကိုဝင်ကြည့်နေတာ
ရွှေဘ၇ူနိူင်း September 3, 2012 at 2:16 PM
:) ALWAYS READING
ဖိုးတုတ် September 3, 2012 at 5:05 PM
ခလေးက မိခင်နို.ရည်အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ ခလေးမွေးပြီး ဆေးရုံမှာ မိခင်က တစ်ချိန်လုံးနို.မတိုက်နိုင်တော့ ဆေးရုံက နပ်စ်တွေက နို.ဗူး -infant formula- တိုက်ရင်တော့ ခလေးက နို.ဗူးကို ပိုစွဲလန်းသွားတယ်၊ အဓိကအကြောင်းအရင်းက မိခင် Nipple ထက် bottle Nipple က ပိုပြီးစို.ရတာလွယ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်၊ သူများပြောတာကြားဖူးတာပါ၊ ဦးခြိမ့်က တကယ်အားကိုးရတယ်နော်၊
ပြီးခဲ့တဲ့လက မဆွိရေးခဲ့တဲ့ အလုပ်အကြောင်းပို.စ်ကို မတွေ.ရတော့ဖူးနော်၊
နောက်ဆုံး အဲဒါ ညည်းနိူ့ မစို့ခဲ့ရလို့ နေမှာပေါ့ဟဆိုတဲ့နေရာမှ ရယ်ရတော့တာပဲ.
akmoe September 4, 2012 at 4:59 AM
အစ်မ ဆွီတီ ...
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ။ ဗဟုသုတလဲရပါတယ်အစ်မ။ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းကျမှ ရီရတယ် ။ ကိုမောင်ခြိမ့်ကြီး အစ်မကို ဗလာ ကစ်လိုက်တာပေါ့ ။
ကျွန် တော့ အ ထင် တော့ ဦး မောင် ခြိမ့် အ ရင် က ထက် အ ခု ပို ညဏ် ပို ကောင်း နေမယ် ထင် တာ ပဲ ဂျူ ဂျူး တော့ သိ ဘူး
Étoile September 6, 2012 at 2:38 PM
ဆွိဆိုတဲ့နာမည် ဘယ်ကရလဲဟင်. :)
ဆွိလည်း ကလေးလေးရရင် နို့မတိုက်ပဲနေမှပဲ .. တီဆွိလိုမျိုး... အဟဲ
Étoile September 6, 2012 at 2:39 PM
ဒါနဲ့ cbox မတွေ့ပါလား
San San Htun September 8, 2012 at 11:27 AM
တီဆွိပို့ စ်တွေဖတ်ရတိုင်း ပြုံးရတယ်
ကျမလဲ နို.မတိုက်ခဲ.ရလို. ကလေးငယ်တုန်းက ဖီလင်ဝင်ခဲ.တယ်
နို.ကသိပ်မထွက်တော. ကလေးက နို.ဘူးစွဲသွားတာလေ
ဆိုဆုံးမခက်တယ်တို. စုံနေတာပဲ ပြောကြတာ
T T Sweet October 5, 2012 at 9:48 PM
c box က ထားလိုက်ရင် တချို့က ပေါက်ကရတွေလာလာရေးလို့ ဖြုတ်ထားရတယ်။